चुनाब Archives - SAMACHAR SANJAL
ठाकुर गैरेले एमालेमा किन पाउँदैनन् टिकट ?
January 23, 2018 admin>
९ माघ, काठमाडौं । एमालेबाट राष्ट्रियसभामा नवप्रवेशी गायिका कोमल वलीले टिकट पाउँदा युवा नेता तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरेको नाम भने स्थायी कमिटीमा पेश नै भएन । प्रतिनिधिसभामा पाल्पा २ बाट प्रत्यक्ष टिकटका दाबेदार गैरेको नाम ०७० र ०७४ दुवै चुनावमा अन्तिम समयमा काटिएको थियो । यसपटक राष्ट्रियसभामा ५ नम्बर प्रदेशबाट अखिलका पूर्वअध्यक्षद्वय खिमलाल भट्टराई र ठाकुर गैरेलाई ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । वाम गठबन्धनको भागवण्डामा एमालेले एक सिटमात्र खुला सदस्यमा पाएकोले सो ठाउँमा खिमलाललाई ल्याइएको छ । खिमलाल ठाकुरभन्दा अघिका अखिल अध्यक्ष हुन् भने ठाकुर दुईपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित…
प्रदेश प्रमुखले शपथ त लिए तर छैन बस्ने ठाउँ
January 19, 2018 admin>
सरकारको सिफारिसमा शुक्रवार ७ वटै प्रदेशका प्रमुख (गभर्नर)हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेका छन् । संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्नेछन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिने प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले १ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, २ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा अनुराधा कोइराला, ४ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा बाबुराम कुँबर, ५ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा उमाकान्त झा, ६ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा दुर्गाकेशर खनाल र ७…
चुनाब देश राजनीति समाचार
सुध्रिएला र कांग्रेस ?
January 18, 2018 admin>
नेपालीमा एउटा भनाइ छ — मोही मथेर नौनी निस्किँदैन । चुनाव हारेपछि देखिएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा यो पार्टीमा अब सिद्धान्त र समर्पणको नौनी बाँकी नरहेको स्पष्ट हुन्छ । अहिलेको तानातान मोही मथ्ने काममात्रै हो । यति ठूलो हारपछि पनि गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अरू विषयमा पार्टीका ठूला साना कुनै नेताको ध्यान गएको देखिएन । उनीहरू पार्टीको संरचनादेखि सिद्धान्तसम्ममा विद्यमान विकृति खोज्न हैन संगठनमा कसरी हैकम जमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिए । पराजयपछि पार्टी सभापतिले जिम्मेवारी लिएर नेतृत्वबाट हट्नुपर्थ्यो । यद्यपि, शेरबहादुर देउवा सभापतिबाट हट्नेबित्तिकै कांग्रेसको पुनरुत्थान…
December 22, 2017 December 22, 2017 admin>
चितवन। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको सरकारको नेतृत्व दुई दलका नेताले आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर चितवनले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता दाहालले भनेभन्नुभयो “सरकारको नेतृत्व आलोपालो अपनाउने सिद्धान्ततः भएकै हो ।” पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेपछि यसको अन्तिम टुंगो लगाउने उनले बताए। पाँच दलको आज बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको गठन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउँदै टुंगोमा नपुगे पनि छलफल सकारात्मक भएको बताए। उनले भने– “यस्तो छलफल आवश्यक छ, फेरि दुईपक्षीय छलफल गरेर समझदारी बनाउन प्रयास जारी…
December 22, 2017 admin>
देशका प्रमुख तीन नेतालाई विदेश कतैबाट फोन आएको समाचार सार्वजनिक भएसंगै मुलुकको राजनीतिक फेरि एकाएक तरंगित बने झै भयो । एकै ठाउँमा उभिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रमुख दलका नेताहरु एकाएक एकै ठाउँ उभिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मुलुकको राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका पाँच दलका नेताहरु गम्भीर परामर्शमा जुटे तर दुर्भाग्य कुनै निकास ननिकाली सतही तर्क गर्दै छुटे । यो मुलुकको राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्छ , मिल्न र छुट्न विदेशीकै भर पर्नु पर्ने । तर नेपालको ऐतिहासिक संविधान २०७२ जारी गर्दा कहिं कतै र कसैको दबाब र सुझाव नसुनेका तिनै नेता र…
December 17, 2017 admin>
२ पुष, काठमाण्डौ । एमाले–माओवादीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई आग्रह गरेका छन् । देउवाले सत्ता छाड्न नमानेर अनेक बहाना देखाएकोप्रति संकेत गर्दै गठबन्धनले मार्ग खुला गर्न आग्रह गरेको हो । नेकपा एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकता गरेर देशलाई स्थिर सरकार दिन प्रतिवद्ध रहेको छाँै । विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो । प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई मजबुत बनाउन प्रतिवद्ध रहेको दुई दलले बताएका छन् । निर्वाचनको प्रभावकारिताका लागि भूमिका खेल्ने संचारमाध्यम…
December 16, 2017 admin>
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् । शनिबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधानविद्हरुले सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रिपतिले रोक्न नमिल्ने राय दिएका छन् । सरकारले दुई महिना अघि राष्ट्रिय सभा गठन सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा विधेयक अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक काम भएको कानुनविद्हरुको निष्कर्ष थियो । ‘संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’ संविधानविदु पूर्णमान शाक्यले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ संविधानमा राष्ट्रिय…
काठमाडौ : अभिनेता राजेश हमालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिएका छन्।वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएकोमा त्यसका नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अभिनेता हमालले भक्तपुरको बालकोटस्थित निवासमा पुगेर बधाई दिएका हुन्। हमालले आगामी सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई स्थिरता,शान्ति र विकासको महायात्रामा अगाडि बढाउन ओलीलाई शुभकामना दिए। हमालले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रियताको अडानले आमनेपाली उत्साहित भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले देश र जनताले आफूलाई गरेको विश्वास दिएको जिम्मेवारीबाट विमुख नहुने बताए। ‘जनता र देशले मलाई जुन विश्वास र जिम्मेवारी दिएका छन् त्यसलाई म कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नेछु’ ओलीले भने ‘देश र जनताका…
काठमाडौँ, १ पुस ।प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफू छिटोभन्दा छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादीका केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सित आज बिहान प्रम निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो जारी गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिनुभएको संयोजक परियारले जानकारी दिनुभयो । सो भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले तीन प्रमुख दलको सहमतिमा मात्र राजनीतिक र…